Indlela amathuluzi okucwaninga ama-Amazon angathinta kanjani ukuhlelwa kokufakwa komkhiqizo wakho?
Bonke abathengisi be-intanethi abaqapha izindaba zebhizinisi ze-ecommerce bazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukubeka imikhiqizo yakho ku-platform ye-Amazon yomhlaba wonke wokuhweba. I-Amazon inikeza izinzuzo kokubili abathengisi nabathengisi. Yingakho kungakaze kube sekwephuzile kakhulu ukwethula imikhiqizo yakho ku-Amazon noma ngabe unayo iwebhusayithi yakho yegama noma cha.
Ukwenza umkhiqizo wakho ubonakale ekusesheni kwe-Amazon udinga ukwakha umkhankaso wokumaketha wokuwina. Kumele kuqashelwe ukuthi ama-Amazon A9 asezingeni eliphezulu algorithm ahluke ngokuphelele kulokho esikujwayele ukubona ku-Google - magenta wedding hat. Ama-Amazon enza ukugcizelela ekukhusheni imali futhi kukhishwa imikhiqizo ngemuva kwalokho. Kusho ukuthi umdayisi ngamunye we-Amazon unethuba lokwandisa imali engenayo yebhizinisi layo jikelele futhi akhange ukuhola okungaphezulu ngisho nakwebhusayithi ye-branded. Kodwa-ke, kuleyo ndawo yokuncintisana ye-e-commerce, akwanele ukubeka imikhiqizo yakho futhi ulinde ukuthengisa, noma ngabe umkhiqizo wakho uyaziwa. Ngakho-ke, ukuze uqinisekise ukuthi imikhiqizo yakho izobonwa yizithameli zakho ezihlosiwe, udinga ukutshala isikhathi sakho nemizamo yamagama angukhiye ucwaningo, nokufakwa ohlwini kokuhlelwa. Ngaphezu kwalokho, kuphakanyiswa ukusebenzisa enye yezinhlelo zokuthengisa ze-Amazon (i-Amazon Vendor Central, i-Amazon Seller Central, i-Amazon Vendor Central Express) ezokwazi ukwaneliseka ngokuphelele ibhizinisi lakho.
Njengomdayisi we-Amazon, unokuningi okumele ukwenze kufaka phakathi ukucwaninga, ukulandelela, nokuphathwa kwezinsizakalo. Uma unemikhiqizo eningi onayo, kuyoba nzima kakhulu ukuyilawula yonke into. Udinga isofthiwe yokulandelela ochwepheshe ukuze ikusize uphumelele impumelelo.
Kule ngqungquthela, ngizokwazisa ngolunye ucwaningo lobuchwepheshe kanye namathuluzi wokuhlaziya okuzokusiza ukuba uthuthukise ama-rankings akho e-Amazon bese uheha ukuhola okuningi.
I-TOP Amazon amathuluzi angakwazi ukukhulisa imali yakho e-Amazon
) Uma ungathanda ukuthola ulwazi olunembile mayelana nokuthi yiziphi imikhiqizo nezinkampani ze-niche ezithandwayo ku-Amazon, i-Jungle Scout izoba ngcono kuwe. Leli thuluzi lokucwaninga lisiza ukuthola imikhiqizo ye-Amazon ongayithola kuyo. I-Jungle Scout iqoqa idatha yokuthengisa yakwa-Amazon enokwethenjelwa kakhulu embonini ukukusiza ugweme noma yimaphi amaphutha ebhizinisi abizayo. Leli thuluzi lihlanganisa umkhondo womkhiqizo oklanyelwe ukulondoloza isikhathi ongayisebenzisa ekucwaningeni okulukhuni. Ngaphandle kwalokho, ungasebenzisa leli thuluzi ukuhlola izincintisana zakho ze-niche. Futhi, ekugcineni, ingxenye engcono kakhulu yukuthi ungacwaninga ngokuzenzekelayo i-niche yakho ukuthola izimali zokufihla imali ezifihliwe. Uma usebenzisa i-Jungle Scout njengesandiso se-Chrome, ungathola ulwazi lomkhiqizo osheshayo kunoma yiliphi ikhasi ophequlula ngalo. Uzohlinzekwa ngentengo yomkhiqizo ngamunye, ukuthengiswa okulinganisiwe, ukubalwa kokubuyekeza nokuningi. Kuzokusiza ukuba wenze imikhiqizo enembile enqoleni.
Ngakho, i-Jungle Scout ingakusiza ukuba ube yi-TOP ye-market ye-Amazon emakethe okuncintisana bese uphuma abaqhudelwano bakho be-niche.
Abathengi abaningi basebenzisa ukusesha kwe-Google ukuthola i-Amazon imikhiqizo. Okokuqala, bafaka igama lomkhiqizo kanye ne-Amazon ebhokisini lokusesha le-Google, bese kuphela avela ekhasini le-Amazon search results. Semalt Amazon SEO isebenza ukuphakamisa amathuba okufakwa kuhlu komkhiqizo wakho we-Amazon ivela ku-TOP ye-Google SERP. Ngeteknoloji eyingqayizivele yokwakhiwa kwesixhumanisi esikhulu, i-Semalt yenza i-Google ihlobanise ikhasi lakho lomkhiqizo nemishwana eyinhloko oyidinga ukuphoqa isitolo sakho kwimiphumela ephezulu. Ungalawula izinyanga eziyisithupha noma ukubhaliswa komnyaka okuzobandakanya lezo zinsizakalo njengeziphakamiso zegama elingukhiye lochwepheshe, umkhankaso wokuqinisa ukuxhumanisa, kuze kube ngu-100 TOP search, ukuthuthukiswa kwe-rankings, kube khona ukuhlolwa kwamaphutha we-SEO nokulungisa. Okubaluleke kakhulu ukuthi uzokwazi ukuthola ukwesekwa okuqhubekayo kochwepheshe kusukela ochwepheshe abanokuhlangenwe nakho okuhlangenwe nakho.
Ngakho-ke, uma ungathanda ukukhipha izimbangi zakho futhi uthole ukugeleza okungapheli kwamakhasimende angakwazi ukuvela emthonjeni omkhulu we-traffic ku-Intanethi, i-Semalt Amazon SEO izokwanelisa zonke izidingo zebhizinisi lakho.
Ukulandelela igama elingukhiye kuyingxenye ebalulekile yimuphi umkhankaso wokwenza ngcono, kuhlanganise nokufakwa komkhiqizo we-Amazon
AMZ Tracker ukuthuthukisa. Yona i-tracker yokuqala ye-Amazon eyinhloko, ngakho-ke kungenzeka ukuthi ikhulile kakhulu kunanamakhono okulandelela amagama angukhiye. Leli thuluzi lisiza ukukhula ngezikhundla futhi zihlale ziphakeme isikhathi eside. Ngokusho kwe-AMZ Tracker isu elihlaselayo, ungakwazi ukufinyelela ngokushesha ukuphakanyiswa kwekhasi lokuqala, ukuguqulwa kwesilinganiso sokuguqulwa, nokuhlaziywa komqhudelwano. Ikunikeza idatha mayelana nezikhundla zezinkhundla zakho zomkhiqizo futhi ulandelela imikhiqizo yomncintiswano wakho ukuze ubone uma benza ushintsho olusebenzayo. Ngaphezu kwalokho, i-AMZ Tracker ibambisana ne-Amazon enkulu yamadili we-Vipon. com evumela ukuthi abathengisi bahlose izigidi zamakhasimende angahle. Enye inzuzo eyengeziwe ukuthi i-AMZ Tracker inika amandla okwandisa uhlu lwakho lomkhiqizo. I-AMZ Tracker Esikhathini se-Analyzer Page sibonisa amaphuzu aqinile nabuthakathaka ohlwini lwakho lomkhiqizo wamanje, unikeze ngeyakho ithuba lokulungisa. Ngaphezu kwalokho, i-Amazon inikeza ithuba lokulandelela ukubuyekezwa okungalungile nokwenza ngezifiso imibiko ye-imeyili.
Leli thuluzi likukhombisa ukucinga okufanele kakhulu amakhasimende akho angasebenzisa ukuthola imikhiqizo yakho noma izinto ezihlobene niche efanayo. Idatha yayo inamagama angukhiye angaphezu kwezigidi ezingu-170. Leli thuluzi lifanelwe ngokuphelele abathengisi abangathanda ukwandisa ukuthengisa kwemikhiqizo yabo e-Amazon. I-Software Merchant Words isisiza ekutholeni imishwana eqondile yegama elingukhiye abathengi abasebenzisa ukuthola umkhiqizo othize. Kulula kakhulu ukulinganisa ngalezi zimishwana njengoba zingenalo ukuncintisana kakhulu. Ngaphezu kwalokho, usebenzisa leli thuluzi, ungathola amagama angukhiye avela emakethe yomhlaba wonke. Isofthiwe yama-Merchant Words ikunika ukufinyelela kwezilaleli zomhlaba jikelele kanye nedatha yemigomo yokusesha kusuka kubathengi bamazwe ahlukene aseYurophu nase-Asia. Ngethuluzi lama-Merchant Words ungenza ukulandwa kwe-CSV ekugcineni ukuhlanganisa le datha nganoma yisiphi isistimu oyisebenzisayo ngokuphumelelayo. Futhi ekugcineni, ukusebenzisa leli thuluzi uzokwazi ukuthola ukwesekwa kwamakhasimende ochwepheshe.
ukhiqiza amagama afanele omseshi omude wokucinga usebenzisa i-Amazon ukusesha umsebenzi. Leli thuluzi lisebenzisa izici ze-Amazon ukuze zikhiqize amakhulu ezinkulungwane ezisebenzelana nemigomo yokusesha emide isikhathi eside. Abathengisi be-Amazon abangathanda ukuthola izici ezithuthukile nakanjani bayozuza ku-Keyword Tool Pro ye-Amazon. Noma kunjalo, izakhi ezinjengokuqapha amagama angukhiye aphezulu kakhulu ahlala zingenakuthola kubasebenzisi beThuluzi legama le-Amazon.